Bayramt Boztepe Ropeway ခရီးသည်များစီးနင်း | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
[09 / 11 / 2019] TCDD တွင်ခန့်အပ်ခံထားရသောသူများ၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုTaşımacılık A.Ş.	06 တူရကီ
[09 / 11 / 2019] TCDD သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Trans-Caspian သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများအတွက် protocol ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်	06 တူရကီ
[09 / 11 / 2019] Adana ပိတ်ခြင်း၏ Ceyhan ခရိုင်အတွင်းရှိဂိတ်	01 Adana
[09 / 11 / 2019] Nostalgic Tram Mersin မှလာ	33 Mersin
[09 / 11 / 2019] mirzmir ရှိရထားဖြင့်ခရီးသည်များသည် 50 Million သို့ရောက်သည်	35 Izmir
[09 / 11 / 2019] Izmir Denizli ရထားလက်မှတ်စျေးနှုန်းများ	20 Denizli
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီပင်လယ်နက်ကမ်းခြေ52 ကြည်းတပ်အဆိုပါကေဘယ်လ်ကြိုးကားကိုခရီးသည် Boztepe လီ Bayram အားဖြင့်ရပ်တန့်ခဲ့ပါသည်
အဆိုပါကေဘယ်လ်ကြိုးကားကိုခရီးသည် Boztepe လီ Bayram အားဖြင့်ရပ်တန့်ခဲ့ပါသည်
10 / 10 / 2014 Levent Ozen 52 ကြည်းတပ်, အထွေထွေ, ကောင်းကင်ကြိုး, TELPHER နေ့ Boztepe ခရီးသည် Ropeway များအတွက်မဲပေးသူခဲ့ yorumlar kapalı
Bayram လီခရီးသည် cable ကိုကား Boztepe အားဖြင့်ရပ်တန့်ခဲ့ပါသည်: cable ကိုကားတစ်စီးဂွန်ဒိုလာလှေ bindi.ordu မှာမနက်စောစော Al-Adha စဉ်အတွင်းတထောင်ကလူတစျနေ့စုစုပေါင်း518 557 အပါအဝင်တပ်မတော်အတွက်မနက်စောစော Al-Adha စဉ်အတွင်းရက်, arefe ပြင်းထန်သောစိတ်ဝင်စားမှုကိုမြင်တော်မူ၏။ အဆိုပါဟယ်လိုအကြိုနေ့က 934, 1 ခံရသောပွဲစဉ်အတွင်း။2405 တထောင်ရက်,2။5378 တထောင်ရက်,3။5နှင့် 3854တထောင်ရက်။4455 တထောင်ကလူတစျနေ့ကေဘယ်လ်ကားလိုင်းအပါအဝင်စုစုပေါင်း 18 557 တထောင်လူများ, ကိုအသုံးပြုပါ။ cable ကိုကားတစ်စီး5စီးအများဆုံးပြင်းထန်မှု 3853တထောင်ကလူအဘို့ဆောင်သောပွဲအတွက်ကေဘယ်လ်ကားလိုင်း။ နေ့ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။
အတွင်းအပြင်နှင့်ပြည်နယ်ပြည်နယ် 18 557 အပြင်ဘက်အကြားနေ့-Boztepe ကြည်းတပ်တထောင်ကလူအမြင့်အတွက်တပ်မတော် Bozteped 550 မီတာစောင့်ကြည့်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ပါတယ် cable ကိုကားတစ်စီးလိုင်းသုံးပြီးတလျှောက်လာ၏။
ပွဲတော်များမှာဧည့်သည်၏ Tunektepe Teleferik နှင့်လူမှု်ဆောင်မှုများမဲပေးသူ 06 / 09 / 2017 Tünektepeကေဘယ်လ်ကားနှင့်လူမှုရေးအဆောက်အအုံများသည်မက်ထရိုပိုလစ်တန်မြူနီစီပယ်ကအဲလ်တာယာကိုငှက်မျက်လုံးမြင်ကွင်းကြည့်ရှုရန်အခွင့်အလမ်းပေးခဲ့သည်။ Antalya ၏ခမ်းနားထည်ဝါသောရှုထောင့်အားဖြင့်နိုင်ငံသားများTünektepeသို့စုရုံးရောက်ရှိလာသည်။
ဧည့်သည်မဲပေးသူ Tunektepe Cable ကိုကားနေ့၌ရှိ၏ 28 / 08 / 2018 Antalya မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး Konyaalti ကမ်းခြေစီမံကိန်း၊ Sarısuနှင့်Topçamအပန်းဖြေနေရာများနှင့်Tünektepe Cable Car Facility9သည်နေ့စဉ်အားလပ်ရက်ရုံးပိတ်ရက်အတွင်း holiday ည့်သည်များ၏မှတ်တမ်းကိုချိုးဖောက်ခဲ့သည်။ ရာပေါင်းများစွာသော Konyaalti ကမ်းရိုးတန်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အလှဆုံးကမ်းရိုးတန်းသို့ပြောင်းလဲသွားသည်။
အဆိုပါကေဘယ်လ်ကြိုးကားကိုဧည့်သည်များ၏ရောက်လာအပေါ် Olympos ပွဲသို့အကြောင်းမဲ့ခဲ့သည် 22 / 10 / 2013 ပွဲတော်အတွင်း Olympos Teleferik visitors ည့်သည်များလာရောက်လည်ပတ်ကြသည်။ Tahtalı Mountain 'Olympos Cable Car' သည်ပွဲတော်အတွင်းအားလပ်ရက် akers ည့်သည်များကို enter ည့်ခံခဲ့သည်။ ANTALYA eri ၏ Kemer ခရိုင်ရှိ Tekirova မြို့ရှိ 2365 မီတာအမြင့်Tahtalıတောင်ပေါ်တွင် 'Olympos Cable Car'
Akçaray, ကျောင်းသားမဲပေးသူခဲ့သည် 21 / 09 / 2019 2019 - 2020 ပညာရေးရာသီဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ TransportationPark A.Ş. Akçarayမှဖွင့်လှစ်ထားသောကျောင်းသားသည်စုပြုံရောက်ရှိလာသည်။ 1 ထောင်ပေါင်းများစွာသော 93 ကျောင်းသားများသည်တစ်ပတ်လျှင်အများဆုံးခရီးသွားသည့် 448 လမ်းကြောင်းများ။
အခမဲ့ကေဘယ်လ်ကားများ၏သိုးစုကိုမှီတိုငျအောငျUğradıAntalyalılar 06 / 02 / 2017 အခမဲ့ကေဘယ်လ်ကားလ် Antalya တွင်နေထိုင်သူများသည်စုရုံးရောက်ရှိလာသည်။ မနက်စောစောတွင်ရာပေါင်းများစွာသော Antalyali ကြောင့်ရေဒီယိုလှိုင်းများလျှော့ချရန်အတွက်9မိနစ်အတွင်း Antisya Metropolitan Municipality မှ Sarisu-Tünektepeကမနေ့ကဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ အခမဲ့ ef
Dumlupınar Crossing ကိုတည်ဆောက်လိမ့်မည်
TÜVASAŞကို Assistant General Manager အဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့သည်
ပွဲတော်များမှာဧည့်သည်၏ Tunektepe Teleferik နှင့်လူမှု်ဆောင်မှုများမဲပေးသူ
ဧည့်သည်မဲပေးသူ Tunektepe Cable ကိုကားနေ့၌ရှိ၏
အဆိုပါကေဘယ်လ်ကြိုးကားကိုဧည့်သည်များ၏ရောက်လာအပေါ် Olympos ပွဲသို့အကြောင်းမဲ့ခဲ့သည်
Paladoken နှင်းလျှောစီး Center ကအီရန်ခရီးသွားဧည့်တစ်ဦးလူအစုအဝေးမဲပေးသူကိုမြင်လျှင်
နိမ်ရောဒနှင်းလျှောစီး kayaksever ရေလွှမ်းခံခဲ့ရ
Uğradıကဲ့သို့ပင်နိုင်ငံရေးပါတီများကင်းမဲ့အတွက် Elmadag နှင်းလျှောစီးခရစ္စမတ်အားလပ်ရက်
နိုင်ငံသားများ၏ Elmadag နှင်းလျှောစီးမဲပေးသူ
Uludag holidaymakers တစ်လူအစုအဝေးရေးဆွဲခဲ့
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ နိုဝင်ဘာလ 2019 (196) အောက်တိုဘာလ 2019 (608) စက်တင်ဘာလ 2019 (557) သြဂုတ်လ 2019 (509) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (502) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (419) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (426) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (542) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (504) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1076) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (971) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (547) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1058) မတ်လ 2013 (1101) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (905) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1167) အောက်တိုဘာလ 2012 (829) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (971) ဇူလိုင်လ 2012 (859) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (562) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (11) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)